COVID-19: Ọrịa Corona na Ọhaneze | Martech Zone
Ihe kariri ihe gbanwere, otua ka ha di otua.
Otu ihe dị mma gbasara mgbasa ozi mmekọrịta: ịkwesighi iyi ihe nkpuchi. Can nwere ike ịkọpụta ihe ọ bụla n'oge ọ bụla ma ọ bụ oge niile dịka ọ na-eme n'oge a COVID-19 kụrụ oge. Ọrịa ahụ emeela ka ụfọdụ ebe dị iche iche, mee ka akụkụ ya niile gbaa gburugburu, gbasaa oghere ndị ahụ, ma, n'otu oge ahụ, jikọtara ụfọdụ oghere.
Rslọ mposi dị ka ndị dọkịta, ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa, na ndị na-enye ndị ogbenye nri na-eme ya n'ọnụ na-emechi ọnụ. Ndị ọrịa a na-emetụta nke ọma na agụghị akwụkwọ enweghị ụzọ ha ga-esi jiri soshal midia mee ka ụwa nụ anụ ha agụụ na-agụ. Fatcats ndị a maara nke ọma kesara nri na iji usoro mgbasa ozi iji gosipụta otu ha si agafe oge.
Gini bu Social Media na eme maka oria ojoo a?
Facebook kọrọ nyere onyinye ihu ọma 720,000 ma kwe nkwa iyi ma nyekwuo ndị ọzọ. O kwere nkwa inye $ 145 nde maka ndị ọrụ ahụike na obere ụlọ ọrụ.
Whatsapp kere a Coronavirus ọmụma ehiwe na kwere WHO ka ịmalite a chatbot adọ ndị mmadụ aka ná ntị banyere coronavirus ihe ize ndụ. Ọ nwere kwuru na ha kwere nkwa $ 1 nde na Poynter Institute nke International Fact-Checking Network iji kwado coronavirus eziokwu mmekorita dị na mba iri anọ na ise site na ngalaba otu mpaghara 45. Enwere 40% abawanye na WhatsApp ojiji.
Ekwesiri ito Instagram maka na-eme ihe iji gbochie mgbasa banyere ihe omuma.
Twitter ọrụ abawanye na ọnụ ọgụgụ banyere 23% na ọnwa atọ mbụ nke 2020 na ikpo okwu na-egbochi tweets nke nwere ike imetụta mgbasa nke coronavirus. Twitter na-enye $ 1 nde na Kọmitii iji chebe ndị odeakụkọ na International Women Media Foundation.
LinkedIn agbachi 16 mmụta ọmụmụ na ndị ọrụ nwere ike ịnweta n'efu ma ọ na-ebipụta ndụmọdụ maka azụmahịa maka ihe ha ga-eziga n'oge ọrịa na-aga n'ihu.
Netflix kwere nkwa ọdịnaya ọhụrụ iji mee ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ n'oge mkpọchi ahụ.
Youtube na-eme ya bit by machibidog mgbasa ozi metụtara ka Coronavirus.
Igwe mmiri chịkọtara ọnụ ọgụgụ na-egosi COVID-19 na coronavirus metụtara okwu e kwuru ihe karịrị 20 nde ugboro na-elekọta mmadụ media, ozi ọma, na TV saịtị.
Ndepụta na-aga n'ihu Snapchat, Pinterest, na ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ na-akụda. Nke ahụ dị mma mana kedu ka ndị mmadụ si eji soshal midia n'oge ọrịa a?
Ezi nke Social Media
Ndị mmadụ ga-anọdụ n'ụlọ mmanye ma nke ahụ na-eduga n'iwepụtakwu oge na mgbasa ozi mmekọrịta. 80% nke ndị mmadụ na-eri ọdịnaya karịa na 68% nke ndị ọrụ na-achọ ọdịnaya metụtara ọrịa metụtara. Obi dị m ụtọ na ọ bụghị mmadụ niile na-agafe oge.
Ọtụtụ ụmụ amaala nwere nchegbu kere websaịtị nke ha na-enye ma na-ekesa nri ndị a na-esi n'ụlọ esi enyere ndị nọ na mkpa aka na-egosi ebe ndị ha ga-agbaba na nlekọta ahụike bụ isi nye ndị nọ na mkpa n'obodo ha. Iji maa atụ, otu ndị otu Mumbai bidoro iji ihe ha nwere esi nri ma kesara ya ndị nọ na mkpa. Ọ ghọrọ usoro enyemaka na weebụsaịtị yana ọtụtụ mmadụ na-esonye na ọrụ ahụ n'ofe obodo ndị ọzọ.
K Ganesh nke Nnukwu nkata, Juggy Marwaha nke JLL, na Venkat Narayana nke Prestige Group bidoro mmalite Feedmy Bangalore iji nyere aka na nsogbu akụ na ụba n'oge ọrịa a Covid19. Ha ga na-enye nri ihe ruru 3000 ụmụaka na-enweghị enyemaka na ndị ezinụlọ ha Parikma Humanity Foundation. Ihe mgbaru ọsọ ha bụ ijere nri 3 lakh n'oge mkpọchi.
Ihe ngosi ntaneti: JLL
Ndi otu NGO na-agbasi mbọ ike inye nri, ndi na-edozi ihe ndi ozo, ihe ndi ahia, na ihe nkpuchi n'oge oria ojoo a.
Ndị ama ama na-eji ndụmọdụ na-enweghị isi na-echekwa otu esi echedo ma chebe ha. A na-eche na ndị mmadụ na-anabata ndụmọdụ mgbe ọ na-esite n'aka ndị ama ama.
Agbanyeghị, enwerekwa nsogbu dị iche iche.
Ajọ nke Social Media
Mgbe agụụ juru ebe niile ma agụụ na-agụ ndị mmadụ, enwere ndị ama ama na-eji usoro mgbasa ozi egosi usoro nri ha na-akwadebe dịka ụzọ iji gafere oge.
Ọ bụghị naanị na India kamakwa na ụwa niile, tụmadị na US na Europe, ndị Alakụba anọwo na ngwụcha akwụkwọ ịkpọasị na-ata ndị obodo niile ụta maka ọrịa a. Akụkọ adịgboroja na vidiyo, yana edemede na-akpali akpali, na-aba ụba, nke bụ ihe jọgburu onwe ya.
Ndi otu ndoro ndoro ochichi na-agbali ime ahihia mgbe COVID Sun na-enwu. Ha nwere ike igosi ntakịrị nghọta kama itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Dị ka ọ na-adị na mbụ, ndị na-enweghị isi na-eji ohere mgbasa ozi ọha na eze eme ihe iji mebie ọgwụgwọ ndị nwere ike ịdị ize ndụ karịa COVID-19. Wishfọdụ chọrọ iji ohere a gbanwere azụmahịa ha. Ndị ọzọ na-enye ndụmọdụ ma ọ bụ akụkọ nwere ike iduhie dị ka: Ndị China ụma na-eme atụmatụ ibunye ụwa ma weghara…, Inye mmiri na ikwacha akpiri na-asacha nje virus ..., Rie nụ garlic…, Jiri mmamịrị ehi na nsị ehi ..., Ọkụ oriọna na kandụl na-esure ihe nsure ọkụ iji chụpụ corona… Cannotmụaka enweghị ike ijide ya… were gabazie. Mgbe ahụ enwere ndị na-enye ngwa nyocha corona nwere malware.
Isi jọrọ njọ nke ndị ọchịchị obodo hụrụ ala na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi na esemokwu nwere ike ịdịgide ogologo oge mgbe coronavirus lara ma ọ bụ belata.
Withzụ ahịa na Mmetụta Ndị Mmadụ
Ihe mara mma nke mgbasa ozi ọha na eze bụ na ị nwere ike ilekwasị anya na ịkwalite akara na aha gị na ị nwere ike iji ya maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ire ahia taa agbanweela mkpebi ya iji tinye patina mmadụ na ọrụ ya.
Ndị ọrụ ugbu a na-eji usoro mgbasa ozi na-egosi nchegbu maka ndị ahịa ma na-agbatị aka iji nyere aka n'ụzọ ọ bụla ha nwere ike, ọ bụghị naanị enyemaka metụtara ngwaahịa. Nke a bụ oge iji wulite ntụkwasị obi, bulie ntụkwasị obi, ma zụlite mmekọrịta. Companieslọ ọrụ ndị na-elekọta mmadụ na-eme nke ahụ. Nweta ihu ọma taa. Ọ ga-atụgharị na ụtụ mgbe e mesịrị n'ihi na ndị mmadụ na-echeta.
Ndị na-ere ahịa dijitalụ jiri mkpụrụokwu gbara ọkpụrụkpụ sitere na nyocha. Ugbu a, ha gharịrị ịmegharị isiokwu ndị na-emesi ike na okwu metụtara COVID-19 iji mepụta mmetụta dị iche na ịkọ ihe na ebumnuche. Onye aghaghi iburu n'uche Brandwatch na-achota echiche ahu banyere ihe corona nje bu ihe ojoo.
Otu ihe kwesịrị ịrịba ama banyere oria ojoo oria na mgbasa ozi ndi mmadu bụ na Youtube, Facebook, na Twitter na-arụ ọrụ iji gosipụta ozi onye kwuo uche ya na ịkọwapụta nsị na-egbu egbu.
Site na echiche sara mbara, mmadụ nwere ike ịsị na ndị na-eji soshal midia eme ihe ọma ga-eme ya na ndị chọrọ iji soshal midia rụ ọrụ ọjọọ ga-eme ya. Ọrịa ahụ agbanweela ntakịrị ihe na soshal midia mana, dịka ha na-ekwu, ka ihe na-agbanwe, ha na-abụ otu. Anyị ga-ama, ọnwa isii site ugbu a.
Tags: COVID-19N'ezie-atuleJuggy MarwahaK GaneshNetflixọrịaugwu ugwuelekọta mmadụ media ọjọọelekọta mmadụ mgbasa ozi ọmaTwitterwhatsappyoutube
Hardik Oza bụ SEO na-arụ ọrụ nwere ihe karịrị afọ 9. Ọ na - enyere ụlọ ọrụ aka ịzụlite azụmaahịa ha. Ọ na-ekwupụta echiche ya na akwụkwọ ndị ọzọ dị ka SEMrush, Ndị Nchọgharị Nchọpụta, na Social Media Taa. Soro ya na Twitter @Ozaemotion.
Otu esi achọta Fonts na Adobe Capture